Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fiantohana GAP
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny fiantohana GAP
Andao tsy handany teny be loatra amin'ny fampidirana ary hitodika hatrany amin'ny resaka.
Inona no atao hoe GAP?
Midika ho fiarovana azo antoka azo antoka izany. Midika izany fa raha misy fatiantoka tanteraka fananana - fiara - vokatry ny halatra na lozam-pifamoivoizana mahery vaika (lafo ny fanamboarana noho ny mividy fiara vaovao) amin'ny alàlan'ny programa GAP ny tompona fiara dia hahazo onitra amin'izany sanda tsy misy fiheverana ny fihenan-danja.
Ny ankamaroan'ny orinasam-piantohana dia mihevitra fa raha vantany vao misy fiara miala amin'ny fivarotana dia very 20% ny sandany.
Amin'ny taona voalohany hampiasana, ny sandan'ny fiara dia mihena 10-18%, ary ny isan'ny tombony azo amin'ny programa fiantohana hafa dia hohenin'izy ireo.
Nandritra ny telo taona nampiasana, ny fiara rehetra ao amin'ny sokajy "toekarena" dia mihena amin'ny vidiny hatramin'ny 30% sy maro hafa.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha tsy misy fiantohana halatra maharitra amin'ny taona voalohany hampiasana, ny mpamily dia tsy hahazo ny vola laniny nividianany ny fiara. Fa amin'ny GAP dia hanao izy.
Ny fiantohana GAP dia tena zava-dehibe amin'ny fiara nohofana. Satria ny fandoavam-bola azon'ny tompony amin'ny fiantohana ara-dalàna noho ny fatiantoka tanteraka amin'ny fiara dia ho ambany noho ny vola tokony haloany amin'ny mpivarotra. Noho io antony io dia maro ny takiana amin'ny fanofana no milaza avy hatrany fa tsy maintsy miantoka ny fiantohana GAP. Amin'ny tranga sasany dia tafiditra ao anaty vidiny mihitsy aza izy io.
Ka raha tsy azonao antoka raha manana fiantohana GAP ianao dia azonao atao ny miantso ny mpivarotrao mba hanazava ny pitsopitsony Ho an'ny fiara indram-bola, matetika ny fiantohana GAP dia tsy maintsy vidiana irery. Ny tombony dia amin'ity tranga ity dia afaka mitodika any amin'ireo orinasa fiantohana fahatelo ianao ary manangona vola kely.
Famerenam-bola amin'ny fiantohana GAP
Raha mandoa ny vola feno amin'ny fiara vaovao ianao alohan'ny fe-potoana dia mety ho azonao a Famerenam-bola amin'ny fiantohana GAP. Mba hanaovana izany dia mila mifandray amin'ny orinasanao fiantohana miaraka amin'ny porofon'ny fandoavam-bola ianao. Ataovy ao an-tsaina fa ny premium tsy ampiasaina fotsiny dia haverina aminao.
Ho fanampin'ny kopian'ny antontan-taratasy avy amin'ny banky momba ny fandoavam-bola dia mila fanambarana ofisialy momba ny mileage ny fiara ianao (azonao atao ny manontany ny mpivarotra) sy ny endrika fanafoanana ny politika fiantohana.
Maharitra 1-2 volana eo ho eo ny anao hanaovana ny antontan-taratasy sy hahazoana ny vola averina. Matetika, ny vola dia miverina amin'ny endrika fisavana.
Anjaranao manontolo ny famerenam-bola amin'ny fiantohana GAP, fa tsy ny orinasa fiantohana, satria tsy mila mampandre anao ny orinasa rehefa misy ny fotoana mety, na milaza aminao mialoha momba izany. Tadidio fa misy orinasa fiantohana te hihazona ny fidiram-bolan'izy ireo.
Ka ny GAP dia zavatra tena ilaina, indrindra raha mividy fiara lafo be amin'ny fampanofana na fampindramambola ianao. Mazava ho azy, tsy azonay atao ny mandrakotra ny antsipirian'ny politika sy ny famerenam-bola amin'ity lahatsoratra ity. Na izany aza, nanandrana nanome anao torolàlana ifotony izahay hitadiavana vaovao ary amin'ny ankapobeny milaza aminao ny momba ny safidy azonao atao.